देउवा पक्षको बैठक : क–कसले केमा राखे उम्मेदवारी ? | Ratopati
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आसन्न १४औँ महाधिवेशन सम्बन्धमा छलफल गर्न आफ्नो समूहका नेताहरूको बैठक बोलाएका छन् । देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठमा जारी बैठकमा महाधिवेशनको तयारी, महाधिवेशनमा पदाधिकारीका उम्मेदवारीलगायत विषयमा छलफल जारी छ । सभापति देउवाले यसअघि नै सभापतिमा दोहोरिने तयारी गरिसकेका छन् । आजको बैठकमा अन्य पदाधिकारीका उम्मेदवारबारे छलफल भइरहेको छ ।
क–कसले केमा राखे उम्मेदवारी ?
बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा नेताहरुले आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार महामन्त्रीमा प्रकाशशरण महत र विश्वप्रकाश शर्माले दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले यसअघि महामन्त्रीमा आकांक्षा व्यक्त गर्दै आए पनि बैठकमा केही खुलाएनन् । उनले आफ्नो उचित मूल्यांकन हुने कुरा मात्र राखेका थिए ।
काँग्रेस पदाधिकारीमध्ये एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सह महामन्त्रीको निर्वाचन हुने र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट निर्वाचित हुने पार्टी विधानको प्रावधान छ ।